Articles tagged 'graeme cremer'
Death of cricket or new dawn? 25 March 2018 HARARE - Warriors fans have often been left devastated after stumbling at the final hurdles of various competitions, but Zimbabwe Cricket's exit against the UAE last Thursday must be the most bitter of pills to swallow. Fans were seen shedding tears of hopeless frustration and sadness as the l...
Zim in agonising loss 20 March 2018 HARARE - Brendan Taylor's 138 went in vain as Zimbabwe lost to West Indies by four wickets in an entertaining Super Six ICC Cricket World Cup Qualifier encounter here yesterday. The result left Zimbabwe to fight for their qualification in their final match against United Arab Emirates on Thurs...
Zim, Scotland in dramatic stalemate 13 March 2018 HARARE - Zimbabwe finished top of Group B with a dramatic tie against Scotland in their last group stage match at Queens Sports Club yesterday. Rising seamer Blessing Muzarabani claimed the last wicket of 21-year-old tailender Brad Wheal whom he had caught behind by wicketkeeper Brendan Taylor...
Cremer banks on home support 12 March 2018 BULAWAYO - With every point gained in the ongoing ICC World Cup Qualifiers right from the round robin stage, Zimbabwe are not taking any foot off the accelerator and are banking on home support when they take on Scotland in a Group B top of the table clash at Queens Sports Club in Bulawayo this m...
Zim inconsistency baffles Cremer 15 February 2018 HARARE - Zimbabwe cricket captain Graeme Cremer is miffed by the inconsistency being displayed by his side in the on-going ODI series against Afghanistan in the United Arab Emirates. On Tuesday, the locals lost the third ODI by six wickets after being bowled out for 154 runs in 34.3 overs whic...
Zim, Afghan series underway 5 February 2018 HARARE - The Zimbabwe men's cricket team continues with its preparations for next month's 2019 ICC World Cup Qualifiers and this morning they date Afghanistan in a Twenty20 match in Sharjah, United Arab Emirates. The second match of the series will take place at the same venue tomorrow before ...
Cremer's milestone in vain as Tigers maul Zim again 24 January 2018 HARARE - Graeme Cremer (pictured) reached 100 One Day International cricket wickets but Zimbabwe made a complete hash of their 217-run chase against the Tigers of Bangladesh in Mirpur, as they were bowled out for 125 and lost by 91 runs. In the process, they also lost control of their path to ...
Cremer match fixing saga deepens 19 January 2018 HARARE - The International Cricket Council (ICC) has charged former Zimbabwe Cricket (ZC) board member Rajan Nayer with three counts of breaching the ICC Anti- Corruption Code. Nayer was charged after he reportedly approached Zimbabwe captain Graeme Cremer with overtures to fix an internationa...
Cremer seeks improvement 17 January 2018 HARARE - Zimbabwe captain Graeme Cremer believes his side's lack of game time ahead of the opening match of the tri-series contributed to their eight-wicket loss to hosts Bangladesh on Monday. After winning the toss, Bangladesh captain Mashrafe Mortaza sent in Zimbabwe to bat first and Cremer'...
Zim in SA for historic Test 17 December 2017 HARARE - Zimbabwe Cricket captain Graeme Cremer arrived on Thursday night from a tour of duty in Bangladesh and had little time to rest as he led his charges into the place of the unknown, the historic four-day Test match against South Africa. The Zimbabwe skipper redeemed himself with three w...
Cremer's wife defends cricket team 7 March 2017 HARARE - Having been stung by the severe criticism the Zimbabwe cricket team got form ex-players after the defeat to Afghanistan, captain Graeme Cremer's wife Merna came to the defence of her man and the players on social media. Zimbabwe were dismissed 54 all out in the final ODI against the A...